Imikhiqizo > Quinazolines
I-quinazoline iyinhlanganisela ephilayo ne-formula C8H6N2. I-heterocycle elimnandi nge-bicyclic isakhiwo esinezintambo ezimbili ezinamakha ezinamafutha ayisithupha, i-benzene ring kanye ne-pyrimidine ring. I-crystalline ephuzi elula ehlanjululwa emanzini. Eyaziwa nangokuthi i-1,3-diazanaphthalene, i-quinazoline ithole igama layo ekubeni yi-aza derivative ye-quinoline. Yize umzali we-quinazoline i-molecule engaqabukeli ukukhulunywa ngaye ngokwayo ezincwadini zobuchwepheshe, izidakamizwa ezithathelwe endaweni eziye zafakwa zokwenzelwa izinjongo zokwelapha ezifana nama-antimalarial and antiticancer agents,
I-afatinib eyamukelekile, isidakamizwa esakhiwe yiBoehringer Ingelheim.
U-Erlotinib, isidakamizwa esakhiwa yi-Astellas, ukuphatha iziguli ze-NSCLC ngezifo ezibangelwa izinguquko ze-EGFR.
I-lapatinib yezidakamizwa zikaGlaxoSmithKline yayiphatha isiteji esiphezulu noma umdlavuza webele we-metastatic ngokuhambisana ne-capecitabine kaRoche.
Kuboniswa konke 8 Imiphumela